Degganaansho maanta laga dareemayo Muqdisho iyo dawladda oo ku hanjabtay sii wadid dagaal. – Radio Daljir
Degganaansho maanta laga dareemayo Muqdisho iyo dawladda oo ku hanjabtay sii wadid dagaal.
Luulyo 29, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, July 29 ? Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta deggan kaddib markii halkaasi shalay uu ka dhacay dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo ururka Al-shabaab.
Wararka laga helayo maanta magaalada Muqdisho ayaa tilmaamaya jiritaanka xaalad degganaansho marka loo fiiriyo siday arrintu shalay ahayd, inkastoo mararka qaarna la maqlayo dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isku ridayaan, iyadoo inta badanna ayba xiran yihiin goobihii ganacsiga ee dhulkii shalay lagu dagaallamay.
Wariyaasha Radio Daljir ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya xasiloonida maanta la dareemay in aysan ahayn mid cago badan ku taagan, wakhtikastana la filan karo dagaal dhaca maadaama ciidamadii shalay dirirtu dhex-martay ay wali difaac iskugu jiraan.
Dhinaca kale saraakiisha ciidanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta sheegay in ay wadi-doonaan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab illaa iyo inta ay gacanta dawladda soo galayaan deegaannada hadda ay maamulaan.
Inta la hubo dagaalkii shalay waxaa dhintay dad gaariya 13 ruux, halka dhaawucuna uu intaasi ka badnaa, waxaana ciidamada dawladda u suurtagashay in ay la wareegeen goobo muhiim ah oo ay horay gacanta ugu hayeen ururka Al-shabaab sida ay Radio Daljir u xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiishii ciidanka dawladda ee horkacayey dagaalkii shalay.
Ma jiro wax war ah oo wali ka soo baxay dhinaca ururka Al-shabaab oo ay kaga hadlayaan dagaalkii shalay iyo khasaaraha loo gaystay ama ay gaysteen.
Dagaalkii shalay ayaa ku soo beegmay xilliga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya laga soo sheegayo xaalad macaluuleed oo khatar ah, kumanaan qoysna ay u baahan yihiin taakulo gargaar kuwaasi oo tabaalaysan xeryo kumeel gaar ah oo laga sameeyey duleedka Muqdisho iyo deegaanno kale oo badan.
Dawladda Federaalka oo sheegtay inay awoodda Al-shabaab ku wiiqayso inta aan la gaarin bisha barakaysan ee Ramadaan.
Baahin: Khamiis, Jul 28, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Dagaal culus oo u dhexeeya dawladda & Al-shabaab oo Muqdisho ka socda; ciidamada dawladda oo gudaha u galay suuqa Bakaaraha; Dad rayad ah oo lagu laayey tuulada Kob-dhexaad, Bari; Markab u raraa ganacsato reer Somaliland ah oo ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah oo la sii daayey; Wasiirada xukuumada R/wassaare Gaas oo maanta la dhaariyey.